Madax Fulinta Arsenal Ee Ivan Gazidis Si Aan Hore Loo Arkin Jamaahiirta Kooxdiisa Uga Baryay In Ay Midoobaan Oo Ay Arsene Wenger Taageeraan. – WWW.Gool24.net
Madax Fulinta Arsenal Ee Ivan Gazidis Si Aan Hore Loo Arkin Jamaahiirta Kooxdiisa Uga Baryay In Ay Midoobaan Oo Ay Arsene Wenger Taageeraan.
Madax fulainta kooxda Arsenal ee Ivan Gazidis ayaa si aan hore loo arkin jamaahiirta kooxdiisa uga baryay ama uga tuugay in ay u midoobaan taageerista kooxda iyo waliba Arsene Wenger. Jamaahiirta Arsenal ayaa xili ciyaareedyadii ugu danbeeyay si wayn ugu qaybsanaa in Arsene Wenger kooxda laga wareejiyo balse xili ciyaareedkii la soo dhaafay ayayba gaadhay in jamaahiirta Gunners ay gacmaha iskula tagaan.
Arsene Wenger ayaa dhawaan saxiixay heshiis cusub oo laba sano uu ku sii maamuli doono kooxda Emirates Stadium ka dhisan taas oo qayb ka mid ah jamaahiirta Gunners uga dhignayd guuldarado kale oo ay kooxdoodu la kulantay.
Laakiin Ivan Gazidis ayaa sheegay in jamaahiirtu ay u midoobaan taageerista kooxda isaga oo waliba balan qaaday in ay suuqa ugu jiraan ciyaartoy heer sarre ah. Arsenal ayaa isha ku haysa in ay la soo wareegto xidigo ay ka mid yihiin Alexandre Lacazette iyo Thomas Lemar inkasta oo la soo diiday dalabyadii ay ku doonayeen labadan xidigan.
Ilaa hadda Arsenal ayaan hal dollar ama gini ku kharash garayn suuqa kala iibsiga ciyaartoyda waxayna si xor ah ama bilaash ah ku heshay Sead Kolasinac kaas oo kooxda Schalke ka soo wareegay kadib markii uu soo dhamaystay qandaraasii uu kula jiray kooxda ree Germany.
Madaxa fulinta Arsenal ee Ivan Gazidis oo la hadlaya jamaahiirta kooxdiisa ayaa yidhi: “Waxaan idinka baryayaa, fadlan isku yimaada isla markaana tababaraheena iyo kooxda taageero siiya.Waxaanu raadinaynaa ciyaartoy tayo sarre leh. Waxaanu yeelanay ragga suuqa soo ilaaleeya oo saddex jeer ka badan intii aanu haysanay afar sano ka hor”.
Ivan Gazidis ayaa hadalkiisa sii raaciyay: ” Waxaan anigu aaminsanahay in si aad u noqoto koox heer sarre oo aduunka ah in aad u baahan tahay in aad heer sarre ku ahaato garoonka dibadiisa”. Arsenal ayaan xili ciyaareedka cusub ka soo muuqan doonin Champions Leaque-ga taas oo saamayn ku yeelan karta xidigaha heerka saree ay doonayeen ee uu sheegay Ivan Gazidis.
Laakiin dhibta ka wayn ee in saxiixyo cusub la sameeyo ee Ivan Gazidis iyo colkiisa Emirates Stadium haysata ayaa ah sidii ay kooxdooda ugu sii hayn lahaayeen xidigaha ugu muhiimsan oo ay Alexis Sanchez iyo Mesut Ozil ka mid yihiin kuwaas oo aan ilaa hadda la xalin mustaqbalkooda.